Akpụ | Ọkọwa Okwu Ahụike
Ọrịa Cancer Ahụ: Na-abịa N’iso Gị Nso
Enwere ihe karịrị otu nde ọrịa ọhụụ nke ọrịa cancer na-achọpụta kwa afọ na United States, na-anọchite anya ihe dị ka ọkara nke ọrịa cancer a na-achọpụta na mba ahụ. Na ọnya anụ ahụ na mmụba dị egwu. Enwere ọnụọgụ ọrịa cancer anụ ahụ ugboro abụọ na ọnụọgụgụ taa dị ka enwere afọ 20 gara aga. Nyere ọnụego mmụba a, ohere dị ihe dị ka 50/50 ị ga - enwu ma ọ dịkarịa ala ọnya ọnya ma ọ bụrụ na ị dị ndụ ruo afọ 70.
Antioxidants Maka nlekọta anụ ahụ.
You Ga - achọ Knowmata Ihe Kachasị Nweta Antioxidant Maka Nlekọta Ahụ?
Ọ bụrụ otu a, you're nọghị naanị… shopFreeMart Hydration Drops nwere ikike inye gị ahụ anụ ahụ dị mma. Ama m na nke ahụ nwere ike ịdị ka ekwenyeghi, mana na oge ị ga-ahụ etu o si arụ ọrụ ọ bụla, yabụ na-elele.
Ọgwụ Ahịa Ahụ - Enwere ọtụtụ usoro ọgwụgwọ a na-enye iji lụsoo mgbaàmà ndị metụtara ịka nká dị ka ahịrị ndị na-egbu egbu, wrinkles, na anụ na-egbu egbu. Usoro ọgwụgwọ ndị a gụnyere Peels Chemical, Botox ịchọ mma, Ntugharị Injectable, na ọgwụ laser iji belata wrinkles, sunspots, na redness. Na mgbakwunye, a na-enye ọgwụ ndị ọzọ maka ahụ gụnyere Spider Vein Removal, Juvéderm, na Laser Wepụ ntutu. Kindsdị ọgwụgwọ ịchọ mma ndị ọzọ dị nwere mejupụtara CoolSculpting, ọgwụgwọ na-aga n'ihu na - enweghị ọgwụgwọ akpachara anya na - eme ka abụba dị nro, nke ahụ na - ewepụkarị ahụ gị. Maka ndị dị na Virginia, ọgwụ Arlington botox bụ ụdị ọgwụgwọ kachasị ewu ewu maka ịchọ mma yana nsị na ahụ. Akpụkpọ ahụ na-agbanwe ka anyị na-aga n’ihu na afọ, na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, akparamagwa olu nke akpụkpọ ahụ gbasiri ike na-amalite belata, na-akpụ akpụ akpụ na ndagide. Juvéderm injectable gel na-ahụ maka gel bụ ihe na-egbu egbu bụ ihe na-egbu egbu nke na-edozi ahụ gị ozugbo ma na-ewepụ ntutu ihu na ude.
Aromatherapy & ịhịa aka n'ahụ
Anyị niile emeela ya. Anyị na-ejedebe ma ọ bụ itinye mmanụ ndị dị mkpa na-enweghị mmerụ ahụ anyị. Eleghi anya, jiri ịdọ aka na ntị niile dị n ’ụwa wee tụọ mmanụ ka ị na-eji atụ. (Otu onye n'ime ndị ọrụ anyị wụsara ounce 8 wụsara mmiri) nke mkpụrụ osisi grape mkpụrụ pink na bekee aka ya… ) Eleghị anya, agwara gị na enwere ike itinye mmanụ mmanụ na-enweghị mmanụ, ma ọ bụ na-enye gị karama roller na-enweghị mmanụ ofu ezu iji dozie nsogbu dị mma.
Biko mee nyocha gị na ntuziaka ojiji akọwapụtara nke ọma maka mmanụ ọ bụla dị mkpa eji anụ ahụ adịghị ike. Anyị na-akwado ma ọ bụrụ na 1 n'ime 1.5% dilution maka ngwaahịa “nlekọta anụ ahụ”, echekwala na mmanụ ọ bụla na-akpasu iwe dị mkpa nwere ọnọdụ ọ bụla na usoro nlekọta anụ ahụ.
Ọgwụ #1 Na-ahụ Maka Ọrịa Aging - Ọgwụ mgbochi Aging kachasị mma
Clifford Nwere ike 10, 2019
Agka Ahụhụ Na - emegide Whatzọ Kasị Mma? Ihe mere agadi na-akpata site na radicals trashing covalent nkekọ na-eme ka enweghị ike na atom nke sel anyị.